Mizotra amin'ny làlany
"Ny làlan'i Jehôvah dia fiarovana mafy ho an'izay tsy misy tsiny, fa fandringanana kosa ho an'ny mpanao ratsy" - Ohab. 10:29.
Raha toa ka nanaraka ny torohevitr 'Andriamanitra hatrany am-boalohany isika, dia maro no efa niova fo hanaraka ny fahamarinana amin'izao fotoana izao. Maro anefa no mametraka ny tongony eo amin'ny làlana mikitoantoana. Ranadahy sy rahavavy, manomitna lala-mahitsy, andrao ho tafintohina ka ho tafiala amin'izany làlana izany ny mandringa. Aoka tsy hisy olona hanaraka làlana mikitoantoana izay efa noforonin'ny hafa, satria tsy ny tenany ihany no mania amin'izay fotoana izay, fa ny hafa ihany koa, izay mahita fa toa efa lala-masaka izany làlana izany. Aoka ianao hifidy ny hizotra amin'ny làlan'ny fankatoavana. Ataovy azo antoka fa mijoro eo ambanin'ny fiarovana lehiben'llay manana ny fahefana rehetra ianao. Aoka ho tsapanao fa tsy maintsy aseho eo amin'ny fiainanao ireo toetran'i Jehôvah, ary tsy maintsy misy asa vitaina ao aminao, izay hamolavola ny toetranao hitovy amin'ny Azy. Atolory hotarihany ny tenanao [...].
Manao ny asantsika eo am-piatrehana fitsarana isika. Aoka isika hianatra avy amin'i Jesôsy. Mila ny fitarihany amin'ny fotoana rehetra isika. Tokony hametraka izao fanontaniana izao hatrany isika amin'ny dingana rehetra: Ity ve no làlan'ny Tompo?" fa tsy hoe: Ity ve no làlan'ilay olona manana toerana ambony noho izaho"? Ny tokony hanahirana ny saintsika dia ny hoe manaraka ny làlan'ny Tompo ve isika sa tsia.
Homen' Andriamanitra voninahitra sy hasandrany ny fanahy manana fo mahatoky sy feno faharesen-dahatra rehetra, izay maniry fatratra ny handeha eo anoloan'Andriamanitra, ao amin'ny fahatanterahan'ny fahasoavan' i Kristy. Tsy handao na hanao tsinontsinona ny fanahy iray manetry tena sy matahotra Izy. Inoantsika ve fa hiasa ao am-pontsika Izy? Ka raha avelantsika hanao izany Izy dia hodioviny sy hohamasininy isika amin'ny alalan'ny harem-pahasoavany, izay fepetra hahatonga antsika ho mpiara-miasa Aminy? Vitantsika miaraka amin'ny hafanam-po sy ny fomba fijery masina ve ny mankasitraka ny herin'ny teny fikasany ka hampifanaraka azy ireny amin'ny tokony ho izy, tsy noho ny amin'ny fahamendrehantsika, fa noho ny amin'ny fitakiantsika amim-pinoana velona ny fahamarinan'i Kristy? - Ms, t. 96, 1902. Tsy misy lehibe sy mahery toy ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny zanany. - RH, 15 Martsa 1906.